Uquqaba lwabazalwane kanye nencazelo yalokho abayikho | Ezezimali Zomnotho
Zonke izimpahla zenkampani zingaqoqwa ngobuningi, ngezigaba ngokuya ngohlobo lwezezimali ezikulo. Ngayinye yalezi izingxenye ezabelana ngezici ezifanayo zingahlukaniswa zibe yizinkumbi ezinkulu zemindeni, okukhona kuzo iningi elikhulu kakhulu. Lezi zimali ezinkulu eziyinhloko ezintathu ezikhona yilezo zezimpahla, lezo zezikweletu, kanye nezo ze- inzuzo enhle.
Kulesi sihloko sizobona ukuthi ngayinye yalezi zingxenye ihlukaniswe kanjani. Ngakho-ke ukuqoqwa kwempahla ngayinye kuqoqiwe ndawonye kuzosiholela ekubeni namandla amakhulu ekwazini ukuthi izimali zisetshenziselwe ini, yiziphi izinzuzo ezitholakalayo, noma izinkokhelo ezisalindile.
1 Amafa namafa awo
2 Izikweletu nezimpahla zabo
3 I-Net Equity
4 Ishidi Lebhalansi libonga amafa
Amafa namafa awo
Impahla imele zonke izimpahla namalungelo inkampani engumnikazi wayo, konke okungokwayo. Isukela kufenisha yasehhovisi, emhlabeni, ukheshi noma imali ebhange, amalayisense okusebenza, amalungelo obunikazi noma okokusebenza kwekhompyutha. Uhlu lude, futhi ngaphakathi kwengcebo enkulu yezimpahla luhlukaniswe izingxenye ezimbili, izimpahla zamanje nezingezona ezamanje.
Okwamanje kuyasebenza: Futhi okubizwa ngokuthi yizimpahla zamanje, izimpahla zamanje zingenye yezimpahla ezimbili ezingaphakathi kwezimpahla eziqukethe izinto eziqinisekisa ukusebenza kwenkampani usuku nosuku. Isikhathi esifushane, futhi impahla yalo ingaphansi konyaka owodwa. Lezi zinsiza kufanele zisetshenziswe, njengezinto zokusetshenziswa, noma zithengiswe, njengomkhiqizo wokugcina. Lokhu kutshalwa kwemali kuyasebenza, futhi izimpahla zamanje zingahlukaniswa ngezinhlobo ezi-3. Amasheya, ayatholakala futhi ayatholakala.
Amafa Okungewona Amanje: Ebizwa nangokuthi izimpahla ezihleliwe, izimpahla ezingezona ezamanje zingaphakathi kwezimpahla zezimpahla lezo eziqukethe izinto ezigcinwa enkampanini isikhathi esingaphezu konyaka owodwa. Kuzo singathola zonke izimpahla ezivumela inkampani ukuthi igcine amandla ayo okukhiqiza. Akukho kutshalwa kwezimali okuhloswe ukuba kube ngunaphakade, futhi ukuthengiswa kwalezi zinto akukacatshangwa. Izimpahla ezingezona ezamanje zihlelwe zaba ngamabhulokhi ama-3. Izimpahla ezingaphatheki, impahla, imishini namathuluzi kanye nokutshalwa kwezimali kwesikhathi eside.
Izikweletu nezimpahla zabo
Izikweletu zingenye yezimpahla ezinkulu ezintathu ezinkulu lapho zonke izindleko nezikweletu kufakiwe. Okusho ukuthi, uma impahla igcina ibika yonke inzuzo enkampanini, isikweletu siyi-antithesis yayo. Ngokuvamile lezi zikweletu zinobunjalo bezibopho zokukhokha zamanje nezesikhathi esizayo njengomphumela wokusebenza kwezezimali okwedlule. Ngokuya ngohlobo lwempahla, ingahlukaniswa ibe ezinye izimpahla ezimbili, lezo zezikweletu zamanje nezingezona ezamanje.
Izikweletu Zamanje: Kubandakanya zonke lezo zikweletu noma izinkokhelo okumele inkampani ibhekane nazo ku- isikhathi esingaphansi konyaka owodwa. Zibalwa futhi ekukhokhweni kwabahlinzeki, ababolekisi, izintela ezisuselwa kulo msebenzi.
Izikweletu ezingezona ezamanje: Zonke lezo zikweletu noma izikweletu nezinye izibopho nazo ukuvuthwa okungaphezu konyaka owodwa. Imvamisa izithelo zokutshalwa kwemali nokwandiswa kwemisebenzi noma ukuqala ibhizinisi. Ukukhokhelwa kwabahlinzeki abanokuvuthwa kwesikhathi eside okungaphezu konyaka owodwa nakho kungangena kule capital capital.
Futhi ezibizwa ngezimali zakhe, yakhiwa inhlokodolobha enikelwe ngozakwethu kanye nezinqolobane ezigcinwe yinkampani ekwazile ukuziqongelela eminyakeni edlule. Kuyinto entweni ebhalansi emele zonke izinsiza inkampani enazo. Ukuze ukwazi ukuyibala, kwanele nge khipha zonke izikweletu kuzimpahla zenkampani. Ngemuva kokuthola umehluko, kutholakala impahla yokugcina enkulu kwezintathu inkampani engayifaka, leyo yenani eliphelele.
Uma ufuna ukucwaninga kabanzi mayelana nokuthi iyini inani le-net, kunesixhumanisi lapho sisanda kukhuluma khona ngobude nobude. Kulesi sihloko ungathola imininingwane eminingi yokuthi izimpahla nezikweletu zikuvumela kanjani ukuthi unqume impilo yezezimali yenkampani.
Ishidi Lebhalansi libonga amafa
Ishidi elilinganisiwe yisampula lesimo sezimali sezomnotho nesezimali senkampani enikeziwe ngesikhathi esithile. Ngenxa yokuthi izimpahla nenani zizoshintsha ngokuhamba kwesikhathi (nangaphezulu esikhathini eside), ibhalansi izama ukuveza inani eliphelele lenkampani ngosuku olunikeziwe.
Inhloso yawo ukuhlela inani lamagugu ngokuhlukanisa iMisa ehlukile yePrimrimial. Ilungiselelwe kusuka ekuhlanganisweni kwemininingwane yokubalwa kwemali yenkathi yezomnotho. Lolu lwazi luvela kumadokhumenti aqhubekayo okuthumela, okuyijenali kanye neleja ejwayelekile.
Inhloso elandelwa yibhalansi sheet ukuhlanganisa zonke lezi zimpahla.. Iqukethe izingxenye ezimbili, ezotshalomali noma izimpahla, futhi ekugcineni lezo zenani eliphansi kakhulu. Kodwa-ke, zihlukaniswe zaba yizimpahla eziyinhloko ezi-3 ezichazwe ngenhla, lezo zezimpahla, izikweletu kanye nenani lilonke.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ibhizinisi » izinkampani » IMisa yamaGugu